Dr. Alex Tuel - Kulliyadaha Hore ee Colorado
Dr. Alex Tuel
Dr. Tuel wuxuu ka shaqeeyey waxbarashada meelo kala duwan oo awooda ah 12kii sano ee la soo dhaafay. Wuxuu labadaba ahaa macalin dugsi sare iyo jaamicad jaamicadeed kahor inta uusan kubiirin CECP, wuxuu ahaa kuxigeen kuxigeenka dhanka tacliinta iyo adeega ardayda heer kuliyadeed. Iyada oo leh noocyo kaladuwan oo kaladuwan, Dr. Tuel wuxuu aad u aaminsan yahay manhaj tacliimeed oo adag si loogu diyaariyo ardayda kaliya maahan dalabaadka tacliinta sare laakiin sidoo kale inay noqdaan kuwo wax soo saar leh, oo muwaadiniin xog ogaal ah. Intaa waxaa sii dheer, Dr. Tuel wuxuu rumeysan yahay jaamicad xoog leh, oo ay kujirto sharaf halka aad aadeyso iskuulka iyo qaab dhismeedka taageerada waalidka oo dhameystiran.
Dr. Tuel wuxuu ka wada helay dhammaan 3-dii digrii ee uu ka qaatay Jaamacadda West Virginia, iyadoo dhakhtarnimadiisii ​​Manaahijta iyo Tacliintuna ahayd tii ugu dambaysay. Wuxuu guursaday 10 sano wuxuuna leeyahay 2 wiil oo cajiib ah, firfircoon.
Parker CEC, Maamulka CECP
Shannon MilesJennifer Daugherty